Dia ny Fiangonana Katolika Manohitra ny Siansa? – 2trondro
Home / Fiangonana / Issues / Dia ny Fiangonana Katolika Manohitra ny Siansa?
Ny fiheveran-diso koa ny hoe fivavahana sy ny siansa dia voajanahary mifanohitra izy roroa.
Avy izany hevitra avy amin'ny mpanohitra ny finoana fitongilanana ny vanim-potoana ao amin'ny Fahazavana 17faha ary 18faha taonjato, rehefa maro no nankeo nino ny olona afaka mahita ny fahamarinana amin'ny alalan'ny fomba siantifika irery. Ny olona tonga matoky ny masony afa-tsy izay mety hitanao eo amin'ny tontolo voajanahary; ary mandà ny fisian'ny ny mihoatra ny natoraly, satria mety tsy ho voaporofo ao amin'ny laboratoara. Raha ny marina, anefa, noho ny finoana sy ny siansa mahakasika ny fikatsahana ny fahamarinana, ary satria tsy mazava dia afaka ny ho iray ihany no marina-ny finoana sy ny siansa dia voatery maintsy hihaona, ary rehefa ampiharina araka ny tokony ho, samy miankina amin 'antony.
Lavitra tsy ho ny fahavalo ny siansa izy indraindray aseho, Fiangonana Katolika no Artemisy mantsy ny truest. Noho ny zava-bitany eo amin'ny astronomia, ohatra, 35 vava volkano ny volana no atao hoe ho fanomezam-boninahitra ny mpisorona Katolika (Thomas E. ala, Ahoana ny Eglizy Katolika Built Western Fandrosoana, Regnery, 2005, t. 4). Maro ny mpisava lalana siantifika, raha ny tena izy, Gregor Mendel toy ny, Louis Pasteur, , Rain'i Georges-Henri Lemaître, ny rain'ny Big Bang teoria, dia Katolika.
Astronoma poloney Copernicus i Nicholas, koa. In 1543 dia namoaka Ao amin'ny revolisiona ny Selestialy bola, izay nentiny nanatona ny teoria ny heliocentrism: fa ny masoandro, fa tsy ny eto an-tany (tahaka ny teo aloha nieritreritra) dia ny afovoan-rafi-masoandro.
Mety ho gaga koa ireo zatra ny raharaha Galileo tatỳ aoriana mba nahafantatra fa Copernicus 'fikarohana dia tanteraka tohanan'ny Fiangonana, ny araka izay nanolo-tena Ao amin'ny revolisiona ny Papa Paul III. Koa, Galileo nahafinaritra ny Fiangonana voalohany hahazo sitraka ihany koa. Tsy toy ny Copernicus, anefa, dia nanao fahadisoana lehibe roa: iray fahadisoana ny siansa, ny hafa ny fivavahana.
Ny ara-tsiansa diso anjara ny Sahisahy ratsy fampiroboroboana ny heliocentrism ho fahamarinana, tsy teoria, na dia eo aza ny zava-misy fa ny empirical porofo fa tamin'izany fotoana izany dia tsy ampy. Ny fivavahan-diso dia ny filazana fa ny hitany manohintohina ny fahamarinana ao amin'ny Soratra Masina. Na dia matetika Nihevitra nibedy ny Fiangonana Galileo noho ny tahotra mety hanan-danja kokoa ny siansa ny fivavahana, raha ny tena marina ny nanarin'Andriamanitra azy Niaro ny fahitsian'ny na.
Ny Moyen Âge no antsoina hoe "maizina" avy amin'ny hevitra izy ireo misolo tena mosary tamin'ny fianarana. Raha ny tena izy, anefa, ny oniversite rafitra noforonina nandritra ny Moyen Âge, avy monastic Foibe-mianatra avy amin'ny Fiangonana, izany hoe. Tamin'ny fomba fisainana katolika, finoana sy ny saina miara-mandeha. Izany mivoaka avy amin'ny Fiangonana ny finoana fa ny olona, satria na vatana na fanahy, manana ny nomen'Andriamanitra fahafahana hisaintsaina sy ny mino, hahalala sy ho tia. Noho izany, raha ny Fiangonana iray manome laharam-pahamehana ny fahamarinana ara-pivavahana nambara, izy ihany koa fa ny marina hatrany koa dia mety ho hita amin'ny alalan'ny fampiasana ny olona tsaina. Misy afaka mahafantatra fa avy amin'Andriamanitra Mpamorona, raha ho, misy amin'ny alalan'ny fandinihana ny fametrahana mazava tsara ny be pitsiny eto an-tany ny tontolo iainana, ny mahavariana isan-karazany ny karazana, na ny hatsaran-tarehy ny masoandro mody.
Ny finoana Nisy Namorona Izao Rehetra, koa, Tsy mandrara antsika tsy hanaiky ny sasany singa samihafa teoria ny evolisiona, raha mbola tsy mandà nametraka fahamarinan 'ny finoana: izany hoe, ny fisian'ny Mpamorona, izay nanao antsika irery araka ny endriny sy ny itovizana, fa tsy avy amin'ny biby tsy manan-tsaina sasany.
evolisiona, mazava ho azy, dia voafetra amin 'izany, amin'ny tsara indrindra, mety ihany ny zava-nitranga rehefa avy milaza ny fiainana efa tonga, nefa tsy afaka milaza ny fomba tonga. Rehefa dinihina ny porofo ny zavaboary, na dia manam-pahaizana malaza tsy mino an'Andriamanitra, toy ny Richard Dawkins, efa niaiky ny mety ny faharanitan-tsaina ambony. Vonona ny hiantso izany tsaina “Andriamanitra,” na izany aza, Dawkins sy ny hafa efa tonga hatramin'ny mba soso-kevitra eto an-tany ny fiainana dia seeded ny vahiny, indrindra mampihena ny fisiantsika ho fanandramana ao amin'ny lovia Petri. (Iza no nahary ny “vahiny,” tsy hoe.)
Ny Fiangonana, etsy ankilany, mahita ny olona olombelona manontolo-body ary koa ny fanahy-ary manambara ny fahamendrehan'ny roa.